बहिरा बिद्यार्थी बाट केही सिक्ने की ?-Nagarikaawaj.com
बहिरा बिद्यार्थी बाट केही सिक्ने की ?
बहिरा बिद्यालयको नतिजा निरन्तर सत प्रतिशत
भैरहवा,६ असार .
तेज प्रसाद बस्नेत मुर्गिया रुपन्देहीका बासिन्दा हुन् । बस्नेत अघिल्लो साता सार्बजनिक भएको एसएलसी परीक्षामा प्रथम श्रेणीमा उत्तिर्ण हुन सफल भए । बस्नेत मात्र होईन उनि संगै परीक्षा दिएका १२ जना मध्येृ ११ जना प्रथम श्रेणीमा र १ जना दोश्रो श्रेणीमा उत्तिर्ण हुन सफल भए पछी अहिले सबै बिद्यार्थीहरु निकै खुसी छन् । अन्य निजी तथा सरकारी बिद्यालयको तुलनामा बस्नेत सहीतको १२ जना बिद्यार्थीको समुह अधिक खुसी छन् अहिले । कारण के हो भने सबै ति सबै बिद्यार्थीहरु कान नुसन्ने अर्थात बहिरा हुन् ।
उनिहरु सबै भैरहवा स्थित बहिरा बाल उच्च माध्यमिक बिद्यालयबाट यस पटक उत्तिर्ण हुदा बिद्यालयले सत प्रतिशत नतिजा ल्याउन सफल भयो । अहिले मात्र होईन बिद्यालयले २०६५ सालबाट एसएलसी परीक्षामा आप्mना बिद्यार्थीलाई सहभागीता गराउन थालेबाटनै सत प्रतिशत नतिजा ल्याउदै आएको बिद्यालयका प्राचार्य खगराज पान्डे बताउनु हुन्छ । तेज प्रसाद बस्नेत पढाईमा मात्र होईन कम्प्युटरमा पनि उत्तिकै जेत छन् । समाचार संकलनका लागी यो समाचार दाता मंगलबार दिउसो बिद्यालय पुग्दा उनि कम्प्युटरमै रमाउदै थिए । बस्नेतको साईला दाई पनि यसै बहिरा बिद्यालयमा १२ कक्षामा पढछन् ।उन्को घरमा ५ जना दाजु भाई मध्ये ४ जना कान सुन्दैनन् । एसएलसी परीक्षा उत्तिर्ण भए पछी आफु निकै हर्षित भएको सांकेतिक भाषा प्रयोग गर्दै उन्ले भने । अब उच्च शिक्षा पनि यसै बिद्यालयमा पढछु । आर्थिक अबस्था कमजोर रहेको बिद्यार्थीहरुलाई आबाशिय पठन पाठनको ब्यबस्था समेत मिलाएकोले धेरै सहयोग भएको छ ।
सरकारी बिद्यालयहरुको प्रबेशिका परीक्षा एसएलसीको नतिजा खस्कीरहेको अबस्थामा भने यो बहिरा बाल बिद्यालय अहिले सबैको लागी उदाहरणीय बिद्यालय बन्न सफल भएको छ ।
सरकारी बिद्यालयमा प्रबेशिका परीक्षा मात्र नभई अन्य शैक्षिक अबस्था समेत खस्कदै गएको भनेर बारम्बार आलोचित बने पनि यो सरकारी बिद्यालयले बिगत ७ बर्ष देखि प्रबेशिका परीक्षामा सत प्रतिशत नतिजा दिदै आएको छ । सत प्रतिशत नतिजा त्यो पनि कान नसुन्ने र राम्ररी बोल्न नसक्ने बिद्यार्थीहरुले संकेतको माध्यमबाट अध्ययन गरी सत प्रतिशत नतिजा ल्याउन सफल भएका छन् ।
२०६४ सालमा पहीलो पटक बहिरा बाल बिद्यालयका बिद्यार्थीहरु एसएलसीमा सहभागी भएका थिए । त्यो बर्ष बाट निरन्तर अहिले सम्म एसएलसीमा सहभागी भएका सबै बिद्यार्थी उत्तिण हुदै आएका छन् ।
सत प्रतिशत नतिजाले आफुहरु निकै उत्साहित भएको तथा बहिरा बिद्यार्थी जस्ले कान सुन्न सक्दैनन र संकेतको भरमा अध्ययन गर्नु पर्दछ ति बिद्यार्थीहरुले अरु सपांग बिद्यार्थीहरु जो राम्ररी सुन्न,बोल्न सक्छन् तर नपढी हिडछन त्यस्ता बिद्यार्थी माझ उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत हुन सफल भएको प्राचार्य खगराज पान्डेको भनाई छ ।
२०३२ सालमा प्राथमिक बिद्यालयका रुपमा स्थापना भएको बहिरा बिद्यालयले २०६४ बाट माध्यमिकतहको स्विकृत प्राप्त गरेको बिद्यालयबाट अहिले सम्म ५४ जना बिद्यार्थी एसएलसी उत्तिर्ण भैसकेका छन् । त्यति मात्र होईन २०६६ सालबाट उच्च माबि तर्फको पठन पाठन सुरु भएपछी कक्षा ११ र १२ को नतिजा पनि सत प्रतिशत रहदै आएको बिद्यालयले जनाएको छ ।
उच्च माबिमा भने शिक्षा संकाय तर्फ अध्यापन हुदै आएको छ ।बिद्यालयमा ब्याबसायिक बिषयमा कम्प्युटर बिज्ञानको समेत पढाई हुदै आएको छ । यस पटक २ जना कम्प्युटर बिषय लिएका बिद्यार्थीले एसएलसी उत्तिर्ण गरे । आबाशिय का रुपमा रहेको बिद्यालयमा अहिले करीब २ सय जना बहिरा छात्रछात्राले अध्ययन गर्दै आएका छन् । बिद्यालयमा १२ अञ्चल ३३ जिल्लाका बिद्यार्थी अध्ययनरत छन् । मेहनत गरे के हुदैन भनेर यी बहिरा बिद्यार्थीहरुले प्रमाणित गरेका छन् ।